Abanye Abenzi nabahlinzeki - China Abanye Factory
UKUSETSHENZISWA OKUTSHINTSHELWE IStrongStep® FOB Rapid Test Strip (Indle) yindlela esheshayo yokubona ukutholwa kokuqagela kwekhwalithi ye-hemoglobin yomuntu kuma-fecal specimens womuntu. Leli khithi kuhloswe ngalo ukuthi lisetshenziswe njengosizo ekutholeni izifo ezisezingeni eliphansi emathunjini (gi). ISINGENISO Umdlavuza odonswa yisifo somdlavuza ungenye yomdlavuza otholakala kakhulu futhi oyimbangela ehamba phambili yokufa komdlavuza e-United States. Ukuhlolisiswa komdlavuza omnyama mhlawumbe kukhulisa ukutholakala komdlavuza e ...
Isixazululo se-Fungal fluorescence staining
The FungusClearTMIsixazululo se-Fungal fluorescence staining sisetshenziselwa ukukhonjwa okusheshayo kwezifo ezahlukahlukene zesikhunta kuzinhlobonhlobo zomuntu ezintsha noma ezibandisiwe zomtholampilo, upharafini noma i-glycol methacrylate izicubu ezifakiwe. Ama-specimens ajwayelekile afaka ukusika, isipikili nezinwele ze-dermatophytosis ezifana ne-tinea cruris, i-tinea manus ne-pedis, i-tinea unguium, i-tinea capitis, i-tinea versicolor. Futhi faka isikhwehlela, ukuhlanza i-bronchoalveolar (BAL), ukugeza i-bronchial, kanye nama-biopsies wezicubu ezivela ezigulini zokutheleleka kwefungal.
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE Isivivinyo seStrongStep® Procalcitonin isivivinyo esisheshayo se-immune-chromatographic sokuthola inani elilinganiselwe leProcalcitonin ku-serum yomuntu noma i-plasma. Isetshenziselwa ukuxilonga nokulawula ukwelashwa kokutheleleka okunzima, kwamagciwane kanye ne-sepsis. ISINGENISO IProcalcitonin (PCT) yiprotheni elincane eliqukethe izinsalela ze-amino acid eziyi-116 ezinesisindo samangqamuzana cishe esingu-13 kDa esachazwa okokuqala nguMoullec et al. ngo-1984. I-PCT ikhiqizwa ngokujwayelekile eC-cel ...
IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, ICoronavirus Antigen Test Kit, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19,